Fleet of Ellicottt® Dredges waxaa loo isticmaalaa Mashruuca Soo-kabashada Tin Tin ee Brazil -Dred Ellicott
DARAJOOYINKA QAADASHADA GAADIIDKA GAARKA AH - “Stelinha V”, “Stelinha VI” iyo “B890E”
Milkiilaha - Mineracao Taboca, Brazil
QODOBADA MADAXWEYNAHA: "Stelinha V" "Stelinha VI" "B890E"
Hull Size - dhererka cagaha 110 ' 81 ' 56
Qoto dheer Qodis 36 ' 26 ' 21 '
Cabbirka Cabbitaanka Tuubbada - Aqoonsiga 16 " 14 " 10 "
Tuujinta Cabbirka Tuubo - Aqoonsiga 16 " 14 " 10 "
Dredge Pump Horsepower 500 600 350
Xoola-qodista 250 100 40
Isugeynta Awoodeed Faras 1000 850 420
WARBIXINTA MASHRUUCA Ilaa hadda tirada ugu badan ee qodista laba-taayirleyda ah oo hal goob ah waxay ka shaqeeyaan macdanta adduunka ugu qanisan adduunka ee ku taal Pitinga, oo ku taal wabiga Amazon ee Brazil. Miinadan oo ku taal meel in ka badan 300 km waqooyi-bari ka xigta dekedda Manaus ee wabiga Amazon, miinada waxaa maamusha shirkadda 'Paranapanema', sanadkii la soo dhaafayna waxay soo saartay in ka badan 10% daasadda adduunka. Maraakiibta loo yaqaan 'dredge' waxaa ku jira afar Ellicott® qodayaasha laba-giraangiraha sumadda leh, iyo shan Ellicott® baaldiyo hal baaldiyo ah.
Macdanta 'Cassiterite' waxaa asal ahaan ka faa'iideystay qashin-qodista Caterpillar 245 oo ah haydarooliga, laakiin Paranapanema waxay isku dayday qodid 10 sano ka hor ah waxayna ogaatay inay hagaajisay soo kabashada daasadda. Kala-baxa ayaa ku habboon xoog-saarista waxayna gacan ka geysaneysaa soo kabashada oo la hagaajiyo. Doomaha Pitinga waxay ka guuleystaan ​​macdanta qoto dheer ilaa 8m. Qeybta ugu weyn waa B1690 laakiin inta badan gawaarida waxay ka kooban yihiin 75 kW - qiimeynta awoodda baaldiga - moodooyinka B890.
Iyada oo loo adeegsanayo qalabka noocan ah, waxsoosaarkoodu wuxuu kor uga kacay tan 3000 ton sanadki sideed sano ka hor ilaa tan oo loo yaqaan 23,000 tons.
Qulqulka taayirrada korantada ee korantada ee xeebta loogu talo galay qodista macdanta si loogu beddelo dhawr qaybood oo qalab dhul qalalan ah loona kordhiyo waxqabadka kala-sooca warshadda. Waxay si wanaagsan u maareysaa dhoobada.